August 4, 2010 — nepalitaly
एमाले तटस्थ बसेकाले मधेसी मोर्चाको समर्थन पाए पनि रामचन्द्र पौडेलको बहुमत नपुग्ने निश्चित
सिंगो मधेसी मोर्चा नभए फोरम, सद्भावना र साना दलले समर्थन गरे प्रचण्डको सम्भावना
प्रधानमन्त्री चयनमा निणर्ायक मत बोकेका मधेसी दलले कांग्रेसलाई समर्थन नगर्ने पक्का भएको छ भने माओवादीका बारेमा निर्णय गर्न सकेका छैनन् । निर्णय गर्न मोर्चाको सोमबार बिहान नौ बजे बैठक बस्दै छ ।
सोमबारको चुनावमा पनि एमाले तटस्थ बस्ने भएकाले मधेसी मोर्चाले समर्थन गरे पनि कांग्रेसको बहुमत नपुग्ने निश्चित छ । माओवादी भने सिंगो मोर्चा वा केही मधेसी र साना दलको सहयोगमा सरकार बनाउने कसरतमा छ ।
मधेसी मोर्चाभित्रका फोरम र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावनाले सोमबारको चुनावमा तटस्थ नबस्ने धारणा राखेका छन् । ‘अब हामी तटस्थ बस्दैनौँ, कुन दललाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न मात्र बाँकी छ,’ फोरमका नेता सीताराम अग्रवालले नयाँ पत्रिकासित भने । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मोर्चाको आइतबारको बैठकमा पनि यस्तै धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ । विषयगत रूपमा माओवादी नजिक भएकाले उसलाई समर्थन गर्ने संकेत पनि फोरमका नेता अग्रवालले दिए । ‘मधेसका विषयमा हामीले अघि सारेको अवधारणापत्रमा माओवादी नै हामीसँग नजिक देखिएको छ, उसलाई समर्थन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
अग्रवालले भनेजस्तै माओवादीसँग मोर्चाले सोमबार बिहान छलफल गर्ने भएको छ । तर, कांग्रेससँग भने धेरै विमति भएकाले ऊसँग थप छलफल गर्नु नपर्ने मोर्चाका केही नेताको भनाइ छ ।
त्यसो त कांग्रेसकै नेताले पनि मधेसी मोर्चाले राखेका केही विषय संवेदनशील भएकाले सहमति जनाउन नसकिएको बताएका छन् । मोर्चासँगको बैठकपछि कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले मोर्चाले उठाएको आत्मनिर्णय अधिकारसहितको स्वायत्त मधेस प्रदेश र नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको समूहगत प्रवेशलगायतका केही संवेदनशील माग पूरा गर्न नसकिने बताएका थिए । ‘राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्न नहुनेलगायतका मधेसी मोर्चाका केही मागमा पनि कांग्रेस असहमत छ,’ छलफलपछि डा. महतले भने ।
तर, माओवादीलाई समर्थन गर्ने कि तटस्थ बस्ने भन्नेमा मधेसी मोर्चाबीच विवाद छ । स्रोतका अनुसार लोकतान्त्रिक फोरम र तमलोपाका नेताहरूले मोर्चाले राखेका सबै बुँदा माओवादी वा कांग्रेसले लिखित प्रतिबद्धता नजनाएसम्म फेरि पनि तटस्थ बस्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायतका नेताहरूले भने अब तटस्थ बस्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
फोरमका नेताहरूले मोर्चाको आधारपत्रमा कांग्रेसभन्दा माओवादी निकट देखिएको भन्दै माओवादीलाई भोट हाल्नुपर्ने बताएका थिए, तर लोकतान्त्रिक फोरम र तमलोपा नेताहरूले भने सोमबार फेरि कांग्रेस र माओवादी दुवैसँग छलफल गर्नुपर्ने अडान लिएपछि आइतबार कुनै निर्णय हुन सकेन । मोर्चाको बैठकपछि आइतबार साँझ लोकतान्त्रिक फोरम, सद्भावना र तमलोपाका नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा छुट्टै छलफल गरेका थिए । यस्ता बैठक राति अबेरसम्म भइरहेका थिए ।
यसअघि, आइतबार नै कांग्रेसले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अघि सारेको आधारपत्रको लिखित जवाफ बुझाएको थियो । कांग्रेसका नेता मोर्चासँगको बैठकस्थल गई लिखित जवाफ बुझाएका थिए । कार्यबाहक सभापति सुशील कोइरालानिवास महाराजगन्जमा आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले मोर्चाले दिएको १६ बुँदे आधारपत्रमाथि छलफल गरी लिखित जवाफ तयार पारेको थियो ।
मधेसवादी दल र अन्य केही साना दलको समर्थन जुटाउने कसरत जारी राखेको माओवादीले प्रधानमन्त्रीका लागि सोमबार हुने निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुट्ने दाबी गरेको छ । माओवादी नेताहरूले तीन सयभन्दा बढी सभासद्को समर्थन आउने वचन आइसकेको दाबी गरेको छन् ।
अनौपचारिक वार्ताहरूलाई जारी राखेको माओवादीलाई स्पष्ट बहुमत पुग्ने गरी आइतबार साँझसम्म भने कसैले समर्थन दिएका छैनन् । तर, माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले तेस्रो चरणको निर्वाचनमा माओवादीका प्रत्यासी प्रचण्ड विजय हुने दाबी गरे ।
‘भोलि -सोमबार) को चुनावमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सबैको समर्थन प्राप्त हुनेछ, प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ,’ आइतबार एक कार्यक्रम प्रकाशले भने, ‘अहिलेसम्म प्रचण्डको पक्षमा तीन सय १० मत जुटिसकेको छ, यो संख्या अझै बढ्नेछ ।’
जनसञ्चार अभियानले आयोजना गरेको अन्तर्त्रिmयामा माओवादी नेता देव गुरुङले मधेसी दलसँग माओवादी नीतिगत रूपमा कुनै असहमति नरहेकाले सोमबार हुने निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाको समर्थन आउने दाबी गरे । ‘मधेसी मोर्चाले उठाएको आधारपत्रमा उल्लेख गरेका धेरैजसो बुँदामा माओवादीले सहमति जनाएको छ,’ नेता गुरुङले भने, ‘अब उहाँहरूले माओवादीलाई समर्थन गर्ने आधार तयार भयो ।’
संविधानसभाको जनादेश, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको म्यान्डेट, शान्तिप्रक्रिया प्रारम्भ भएयता विभिन्न क्षेत्रबाट राखिएका मागको प्रक्रियागत सेफ ल्यान्डिङ गर्नसक्ने क्षमता र सबै विदेशी हस्तक्षेप अन्त्य गर्नसक्ने साहस माओवादीसँग भएकाले माओवादीको नेतृत्वको सरकार अनिवार्य भएको माओवादी भनाइ छ । ‘माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा हामी सबैखाले विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्यको पहल गर्नेछौँ,’ प्रकाशले भने ।
माओवादीले एमाले दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको पक्षमा रहेको भए माओवादीलाई समर्थन गरेर दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । ‘एमाले दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको पक्षमा छ भने उसले दुई तिहाइ पुर्‍याउन सहयोग मागेका वेला माओवादीले झलनाथ खनाललाई सहयोग गरेझैँ अब दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन माओवादीलाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ माओवादी स्थायी समिति सदस्य गुरुङले भने ।
माओवादीले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ताको सम्भावना नरहेको संकेत दिएको छ । ‘प्रचण्डले अब कुनै हालतमा उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहुन्न,’ प्रकाशले भने, ‘प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिले उम्मेदवारी फिर्ता लिने कुरै हुन्न ।’
समर्थन जुटाउन कसरत
प्रचण्डको पक्षमा बहुमत जुटाउन माओवादी नेताहरूले आइतबार दिनभर कसरत गरे । अध्यक्ष प्रचण्डसहित माओवादीका नेताहरूले अनौपचारिक वार्ता जारी राखेको माओवादी स्रोतले बतायो ।
प्रचण्डले उपाध्यक्ष प्रकाशसहित वर्षमान पुन अनन्त, शाक्ति बस्नेत, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मालाई मधेसवादी दल र अन्य साना दलका नेताहरूसँग वार्ता गर्न जिम्मा दिएका थिए ।
माओवादी नेताहरूले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको समर्थन जुटाउन कसरत गरेका छन् । मोर्चामा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी छन् । प्रचण्डलाई विजयी बनाउन दुई सय ३७ सभासद् रहेको माओवादीलाई थप ६३ मतको खाँचो छ । मोर्चामा आबद्ध दलका ८२ सभासद्को समर्थन पाए प्रचण्डले सजिलै जित्नेछन् । सिंगो मोर्चाले सहयोग नगरेर केही मधेसी दलले समर्थन गरे उनले बहुमत पुर्‍याउन साना दलको भर पर्नुपर्नेछ ।
« माओवादीलाई ‘एक मधेस एक प्रदेश’ अस्विकार्य
विश्व क्रिकेट लिग डिभिजनका लागि खेलाडी छनौट »